Waxbarashada suuqa shaqadu waxay xoojineysaa aqoontaada oo ay fududeyneysaa in aad shaqa heshid. Waxay waxbarashadu ku gaarsiineysaa xirfad leh mustaqbal wanaagsan oo muuqda.
Baadigoobo tababarka suuqa shaqada
Waxaa la heli karaa tababarrada suuqa shaqada, kuwaasoo lagu barto xirfado kala duwan. Halkaan waxaad hab fudud ka heleysaa tababarrada suuqa shaqada ee imminka la heli karo, waxaana islamarkaana isha ku dhufan kartaa booqashooyinka aqoon-kororsiga ee aad isku qori karto.
Baadigoobo booqashooyinka aqoon-kororsiga
Booqasho waxbarasho waxaad ku ogaaneysaa in ay waxbarasho ama xirfadi kugu habboontahay. Isku qor adigoo e-mail u diraya qofka xiriirka u ah waxbarashada ama waxbarashooyinka aad daneyneysid. Iskuduwaha waxbarashada ayaa dabadeed kugu soo war celinaya si uu wax kuugu xaqiijiyo.
Waxbarashada suuqa shaqadu, waa waxbarasho gaaban, oo xirfadeed oo ku aaddan xirfad ay yaryihiin shaqaalaha waxbarashada u lihi. Dhammaan waxbarashooyinka suuqa shaqada iyo xirfadaha lagu gaari karo, waxaa loogu tala galay dadka oo dhan, iyadoo aan jinsi loo eegin. Waxbarashadu ma damaanad qaadeyso in aad shaqo heleysid, laakiin si fiican ayey fursadahaaga u wanaajineysaa. Waxbarashadu badanaa, waa dhawr toddobaad ilaa iyo lix bilood, laakiin mararka qaarkoodna intaas waa ay ka dheeraan kartaa. Waxbarashadu waa mid la dhiganayo waqti buuxa.
Waxyaabo fara badan ayaa saameynaya fursadahaaga ku aaddan in aad dhigatid waxbarasho suuqa shaqada ah. Waxaan isu miisaameynaa waxbarashooyinkaagii iyo khibradahaagii hore, fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid iyo sida ay u muuqato baahida suuqa shaqada. Waxaad u baahantahay in aad shaqa-doon ahaan agteenna ugu qorantahay. Waxaad sidoo kale u baahantahay in aad buuxisid wax ka mid ah waxyaabaha soo socda:
Waxa aad buuxisay 25 sano
Waad ka yartahay 25 sano, balse waxa aad qabtaa kala dhantaalnaan xagga laxaadka ah oo saameyneysa awooddaada shaqo
Waxaad buuxisay 18 sano, waxaadna ka fogtahay suuqa shaqada
Iyadoo laga duulayo shuruudaha kor ku xusan, waa Xafiiska shaqada cidda qiimeyneysa oo go’aan ka gaareysa in la joogo waqtigii aad dhigan lahayd waxbarasho suuqa shaqada ah iyo in kale. Kuwa dhigan kara waxbarashada suuqa shaqadu, marka laga reebo kuwa buuxinaya shuruudaha kor ku xusan, waa ay is bedbeddeli karaan waqti ka waqti.
Sidan ayey wax u shaqeynayaan
Waxbarashooyinka waxaa bixiya abaabulayaal waxbarasho oo waddanka ku kala baahsan, iyadoo aannu annagu hawsha u dirsannay. Adeeggeenna digitaalka ee ”Hel waxbarashooyin suuqa shaqada ah” ayaad ka dhex raadsan kartaa waxbarashooyin kala duduwan, adeeggeenna digitaalka ee ”Hel booqasho waxbarashana” waxaad iskaga qori kartaa booqasho waxbarasho. Laga yaabee in aad heshid waxbarasho adiga si gaar ah kuugu habboon.
Taageero wax barid ah
Waxaad heli kartaa taageero wax barid, laguna dhameystiro qalab caawimaad, marka aad ka qaybqaadato qaar ka mid ah hawlahayaga waxbarasho. Nagala hadal wixii adiga ku khuseeya.
Taageero wax barid oo shakhsiyan ah (IPSU)
Ka raadi halkan caawimaad dheeraad ah